အရက်သမားစကား အရက်သမားစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရက်သမားစကား အရက်သမားစာ
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Aug 20, 2012 in Creative Writing, Think Different | 36 comments
ကွန်းမင့် ၁၀ခုရရင် သေပျော်ဘီ အရက်သမားစာ
အယ်….. ဒါဆိုရင် ခါတိုင်း ရက်တွေကျတော့လို့ …. မမေးနဲ့ … ဟဲဟဲ သောက်တာပါဘဲ။ ဒီမှာတင် စကားအချိုးက ပြောင်းသွားဘီ သိတယ်ဟုတ်.. နိူင်ငံရေး သမားလုပ်မလို့ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်စကားထက် အထက်မရောက် အောက်မရောက် ဆယ်ရောက်နားထောင်ရင် ဆယ်ပုံ ဆယ်ကြောင်း ဖြစ်အောင် မနည်းလေ့ကျင့်ထားတာ။ အလကားပြောတာပါ မူးနေတော့ ဒီလိုဘဲ ဟိုပြောသည်ပြောပေါ့ အရက်သမား စကားမပီ၊ အရက်သမားစာ မတည်တော့ ဘယ်လိုလူ လက်ခံလိမ့်မတုန်း၊ ထားပါ ဒါကလဲ ပုတ္တောတွေပါ။ ဒီတလော ဘာဖြစ်တယ် မသိဘူး အရက် သောက်လို့ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး၊ အရင်ကတော့ အရက်ကလေး တပက်လောက်ငှဲ့ ပီးရင် တချိန်က နှောင်းအတိတ်လွမ်းစရာတွေကို တယောက်ထဲ ပါးစပ်ကလေးလှုပ်ပီး စားမြုံ့ပြန် ကျုပ်ဟင်းဖုန်းထဲက စန္ဒာယားထွန်းညွန့်ရဲ့ “ကိုယ့်ရပ်ဌာနေ”သီချင်းလေးဖွင့် နားကြပ်လေးတပ် အရည်လယ် ခံစားဖြစ်သဗျ၊ အဲ နှစ်ခါလောက်ကျော့ နားထောင်ပီးရင်တော့ အင်တာနက်ဖွင့် နိူင်ငံရေးအကြောင်းတွေဖတ် အဲအချိန် Ke$haရဲ့ Blow Blow ကြီးဝင်လာတယ်၊ ဟမငီး ကျုပ်နားထဲ Bla Bla ဘဲကြားနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ လန့်ဖြန့်ပီး သီချင်းပိတ်ရမှာလား ဖွင့်ဖတ်နေတဲ့စာ ပိတ်ရမှာလား သိတဲ့အတိုင်း အရက်သမားမို့ ဂယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်သပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မိတ်ဆွေရယ် အားလုံးက ရပ်စေချင်ရင် one click ပါဘဲ…….။ ကျုပ်ရဲ့အမှားကိုက ကိုယ့်ဘ၀မွေးဖွားရာ ဒေသအကြောင်းလေး ဆွတ်ပျံ့စေတဲ့ သီချင်းကို အနှီဟင်းဖုန်းထဲမှာ ကျုပ်ရဲ့လက်ရှိ ခေတ်မှီကြောင်း ပြနေတဲ့ ..ပြချင်တဲ့ သီချင်းနဲ့ folder ခွဲထားပေမဲ့ Music Playerက အကုန်ဖွင့်လို်က်တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျုပ်ရဲ့ ရသပုံဆောင်ခဲကြီးဟာ ရရ်သမ်ပျက်ပီး နည်းနည်းတော့ လွဲနေရှာသပေါ့ …………….။
အယ်….. ဒါဆိုရင် ခါတိုင်း ရကိတွေကျတော့လို့ …. မမေးပါနဲ့ … မမေးကြပါနဲ့ သောက်တာပါဘဲ။ ဒါကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာတာပါ၊ ကျုပ်တရက်ထက် တရက် အရက်သောက်လာတယ်၊ အရင်က အရက်သောက်တာကို ကြွားလဲမကြွားချင် အမှန်တိုင်းလည်း မပြောချင် မပြောရဲဘူး အခုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမှန်တကယ် မြင်တွေ့နေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပီ၊ ဟုတ်ကဲ့ ကျုပ်နေ့တိုင်း သောက်ပါတယ်၊ နေ့တိုင်း မူးပါတယ်၊ နေ့တိုင်းမှားနေလားတော့ ပြန်ဆင်ချင် တတ်လာပါပြီ၊ ဘေးလူကြည့်ရင်တော့ ကျုပ်ဟာ အမြဲတမ်း မှားနေသူပေါ့ ဘာလို့လဲ မေးရင် မဖြေတတ်ဘူး ကျုပ်အခု မမှားအောင် ဟင်းဖုန်းနဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့ နားထောင်နေတယ်။ ထို ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင် သံဃာတော်ရဲ့ လက်တွေ့ကျမှုနဲ့အတူ ကျေးဇူးလည်းတင်မိပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓကို ကိုယ်တိုင်မမြင်ဖူးသလို ဗုဒ္ဒခေတ်က ဘာစကားနဲ့ ဘယ်လိုတရားဆိုတာ မမှီလိုက်တော့ အခု ကျုပ်တတ်တဲ့ ဗမာစကားခေါ်မလား မြန်မာစကားခေါ်မလား အဲဒါနဲ့ နာကြားရတော့ အဆိုပါ ရဟန်းသံတော်ကို ကျုပ်ကျေးဇူးတင်တာ သဗျ။ အဲဒါကို ဒါက ဗုဒ္ဒမဟောဘူး ဒါက ဗုဒ္ဒဟောတာ ဒါက နောက်ပိုင်း ဖြည့်စွက်တာ စသဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိူင်သူ အဂ္ဂမဟာပညာရှိတွေက သာဓု ခေါ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ကျုပ် မူးမူးနဲ့ စဉ်းစားတယ် အတွေးတွေ ချာချာလည်လို့ …… ဒီလိုဗျာ
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့်က…. ဂေါတမ အမည်ရှိသော သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ရအံ့သော ဘုရားရှင်ရှိဖူး၏
ဟား… ဟား (မူး၍ ရယ်သံ)
အခု ၂၀၁၂ …. အနှီပညာရှိတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆင့်ဆင့် ကူးပြောင်း အပ်လာသော တရားကျမ်းဂန် တို့အား ဖတ်ပီးနာကြားပီးမှာသာ ဆွေးနွေးနိူင်ကုန်၏
ရှင်းရှင်းပြောရရင် Source က ဒီတလမ်းဘဲ ရှိတယ် ဒါကိုလာပြီး ၀ိဝါဒ လာကွယ်နေတယ်။ ပီးတော့ လူတကာမြင်အောင် ၀န်လိုင်းပေါ်မှာ အာချောင်တယ် …………
မူရင်း ဘယ်သူ့မှာ ရှိသတုန်း အနှီပညာရှိတို့ ရေးသားကြလတ္တံ့သော စာများ ဆွေးနွေးမှုများ မတိုင်ခင်၊ အနှီပညာရှိတို့ ဘယ်လိုလေ့လာမှုများ ပြုကြသတုန်း……….
မူးမူးနဲ့ ပြောရရင် ကျုပ်က အရက်သမား ဆိုတော့ လူမလေးစားဘူး
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အသစ်သစ်တွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှိနေတယ် ရှိလာအုံးမယ် … ။
အဲတော့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ငြင်းခုန်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ အထူးပြုခြင်း၊ အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စသဖြင့် …
ဘယ်သူရေးတာလဲတော့ မသိဘူး လောလောဆယ် ကျုပ်ရေးလို့ ကျုပ်တာဝန်ယူတယ်
နိူင်ငံရေး အကြောင်း မူးမူးနဲ့ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းနေတယ် ပိုမူးလာသလိုဘဲ
USA မှာ ( အမေရိကန်နဲ့ အမေရိက မခွဲတတ်လို့ ) စံပြ ဒီမိုကရေစီပေါ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ ဘာတွေ ညာတွေ ကျုပ်လည်း မသိဘူး၊
ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်က နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လောက် အာဏာရှိတယ် ဆိုတာ ……………………………………………………
ကျုပ်လို ငမူးကို သင်ပေးနိူင်ကြမလား ခင်ဗျာ
အထက်ပါ အကြောင်းအရာ များနှင့်ပတ်သတ်၍ အကျနုတ် အရက်သမားအား နည်းပေး ဆွေးနွေး လမ်းတည့်ပေးစေလိုပါသည်။ ကယ်ကြဘာ ဆရာ့ ဆရာတို့ အမိုက်မဲလေးကို အစွဲမရှိအောင် ချွတ်ပေးကြပါ။
သင်တန်း မတက်နိူင်၍ ဆွပေး နှိုက်ယူ ပညာရေး စနစ် အကောင်အထည်ဖော်နေသူ
ကရင်/ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲစည်
ရေးခြင်နေတာတော့ အများကြီးဘဲ အရှည်ကြီးတော့လဲ မရေးချင်ဘူးဗျို
ရွာထဲ တတ်သိပညာရှင်တွေ များတော့ အရှည်ကြီး လူရှိန်အောင် ရေးလိုက်ပေမဲ့ သောက်မြင်ကပ်ပီး မေးလာရင် မဖြေတတ်တော့…
ကနေမူးနေတယ်ဗျ ဆိုပြီးအစချီထားတဲ့ ကိုရဲစည်ရေ
ကျွန်တော်လည်း ၄-၅ ခါလောက် အပြန်အလှန်ဖတ်လိုက်မိပြီး၊
ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ပြောလို့ ရလာတယ် ကျွန်တော်အခု မူးသွားပြီဗျာ။
သိတယ်မှလား အွန်လိုင်း စာပေလေ ဘယ်သူ့သမိုင်းမှ မှတ်ကျောက် မရှိဘူး
ကွဲပြား နိူင်ကြောင်း …
ဟိုတစ်ခါ သဂျီး ကျုပ်ကို ပြင်ပေးတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပဲ
နိုင်ငံဆိုရင် အမေရိကား လို့ ခေါ်ရမယ်တဲ့
နိုင်ငံသား ဆိုရင် အမေရိကန်တဲ့
ပုံ စာဖတ်ရင်း မူးသလိုလိုဖြစ်သွားသော
လေးခုမြောက် ကွန်မန့် ဖြစ်လေ၏ ..
နောက် (၆) ခုဘဲ လိုတော့တယ် …
အရေးထဲ တိုင်းကျိုးပြည်ပြု စွန့်လွှတ်နစ်နာခံ အတွေးအခေါ် အယူအဆ စွန့်ဦးတီထွင် …………
ခွိ … ပတစ်
ရေးရင်းနဲ့ ရှုးထွက်သွားလို့ ..
အဲ့သဟာကို သူရဲ့ ၂၀၀၀မြောက် မဟာဥဒန်း ရာဇ၀င်တွင် ကွန်းမင့်ဖြစ် လာမန့်နေသေး
အိုင်ဒီယိုလိုဂျီ အမူးသင် ပထမတန်း
ရှိတ်အာ မိုဟာမက် ခရစ်စတင်း သောမတ်စ် အရိယဲ
ဟေ့လူ .. ဟေ့လူ ..
ကျုပ်ကွန်မန့် နှစ်ထောင်ပြည့်သေးဘူး …
ဒီဂဟာရောဆို .. နောက်တစ်ခုဘဲ လိုဒေါ့ဒယ် ..
ခညားဂျီး ၁၀ ခုရရင် သေပျော်မယ် ဆိုလို့
ကျုပ်က စေဒနာဒွေနဲ့ဘာ ..
၂၀၀၀ ပြည့်အောင် ထပ်မန့်ဗျာ
ဒီမှာ အူးလေး မဟာရာဂျာ အံဇာဒုံး
ကျုပ်ရဲ့ ဘ၀နဲ့ ရင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို
ခုလို ကောင်းချီး မင်္ဂလာပေးလို့
ဒါကြောင့် သာဓု .. သာဓု
အော် နှစ် ၅၀၀၀ ကျိန်စာ…
အု ….အူ …. အူး
.ကျုပ်တရက်ထက် တရက် အရက်သောက်လာတယ်၊ အရင်က အရက်သောက်တာကို ကြွားလဲမကြွားချင် အမှန်တိုင်းလည်း မပြောချင် မပြောရဲဘူး အခုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမှန်တကယ် မြင်တွေ့နေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပီ
“အားလုံးက ရပ်စေချင်ရင် one click ပါဘဲ…….။”
ဒီစကားကို အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ် ….
ဗုဒ္ဓ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေထဲမှာပေါ့ဗျာ …
သောတာပန် အဆင့်ကို ရောက်တာနဲ့ ဘဝမှာ နောက်ထပ် ခုနစ်ဘဝသာ ဆက်ရှိပြီး နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရမှာ အသေအချာပဲတဲ့ဗျ …။
ဒါနဲ့ တိုင်းကြည့်ရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင် ပါရမီတွေ၊ ဘာတွေ ထည့်တွက် နေစရာ မလိုပါဘူး …။
သောတာပန်ဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို တစ်ခါမြင်ရုံ “One Click” လေးပါပဲ။
ဒါလေးကတော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့ “One Click” ပေါ်ကို မူတည်ပြီး မန့်လိုက်တဲ့
ကျုပ်ရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ “2000” မြောက် ကွန်မန့်ပါပဲ ခင်ဗျာ …
ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ မောင်ငယ်အံစာ
လေးစားပါတယ် ကိုရဲစည် ဆိုလိုရင်းကို မြင်မိပါတယ် တားတားကိုယ်စား ရေးပြသလို ထပ်တူ ဖြစ်ပါသည် …တခုပဲ ထပ်ဖြည့်ကြည့်ပါ့မယ် စနစ်တံကြောင့် မဟုတ်ဘူး …..:)
မူးမူးနဲ့ ပြောတာလေး မှန်ချက်တော်။
“အဆိုပါ ရဟန်းသံဃာတော်ကို ကျုပ်ကျေးဇူးတင် သဗျ။ အဲဒါကို ဒါက ဗုဒ္ဓမဟောဘူး ဒါက ဗုဒ္ဓဟောတာ ဒါက နောက်ပိုင်း ဖြည့်စွက်တာ စသဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိူင်သူ အဂ္ဂမဟာပညာရှိတွေက သာဓု ခေါ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ”
ဒိတရားတွေ ဘုရားဟောဟော သာဝကဟောဟော နှစ် ၂၀၀ မှ ပေါ်ပေါ် အန်တီကတော့
လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ အပြစ်ကင်းတဲ့ အလုပ်ဆို အမှန်ပဲလို့ သတ်မှတ်ပါကြောင်း။
မမူးရင် ရေစည်ပါ အဂ္ဂမဟာရဲစည်ဖြစ်သွားမလား…………
ကျနော်တို့ စာတတ်တာ မူလတန်း စသင်ခဲ့ရလို့
အဲတော့ ဒီနေ့ စာတတ်ပီး မနက်ဖြန်မှာ မူလတန်း ပညာရေးစနစ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဝေဖန်ရင်
ကျနော်တော့ မကြိုက်ချင်ဘူး ….. ဒီတော့ မပြောရဘူးလားမေးရင် အဖြေမရှိဘူးဗျ ……………………
အွန်လိုင်းပေါ်က ဘာသာရေး ဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့် အကျိုးဆက်က ကောင်းလာဖို့ထက် ……………
ကျနော်သာ ရွှေတိဂုံဘုရား ဂေါပကဖြစ်ရင် အောက်က ဌာပနာတိုက်ကို CCTV ကင်မရာတပ်ပီး အဲမှာတွေ့လား နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀က ဘုရားရဲ့ ဆံပင်တွေ … အဲလိုကြွားချင်ရဲ့
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာက ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ အသိဥာဏ်ပေါ် မူတည်နေတယ်။
ဖတ်မှတ်ကျင့်ပီး ပြန် share ဖို့မဟုတ်ဘူး
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ facebook တို့ twitter တို့ကို သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်နဲ့ စထွင်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ ဘာ.. ဘာသာ အယူအဆမှ ကွဲလွဲနိူင်စရာ မရှိဘူး
ဒါက Entrance လို့ဘဲ မှတ်ယူတယ်
ဆိုတော့……………. ဒီစကား ပြောလို့ ရဲစည်သေရင် ငရဲမရောက်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း …..
A BLEND OF SCOTLAND’S FINEST MALT & WHISKIES
DISTILLED , BLENDED & BOTTLED IN SCOTLAND
ခုပဲသွားဝယ်တဲ့သူ ရောက်လာတယ် ။ အဲဒီတလုံး ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းပျင်းနဲ့ ဖြိုရမှာ ။ မသောက်ခင် မန့်သွားပါတယ် ။ မဝသေး ရင်လာခဲ့လေ ။
ခင်ညားတို့များ နိူင်ငံခြား ရောက်နေတယ် ဆိုပီး အနော်တို့ သေရင်တောင် မမြင်ဘူး မသောက်ဖူးတဲ့ အရက်တွေ လာပြောတော့ ရင်နာသဗျာ …. မှန်းစမ်း အခုတောင် ခင်ဗျားရေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ အနော့်မှာရှိတဲ့ သာလွန် အင်္ဂလိပ် မြန်မာအဘိဓာန်ထဲ ရှာမတွေ့ဘူးဗျို့ … အင်းလေ သူက စာမျက်နှာ ၅၀၀ထဲကိုး ….
အခုလို ကွန်းမင့်ပေးတာ ကျေးဇူးဗျို့
အရက်သောက်ရင်တော့ ခွက်လှည့် မကျော်တတ်ဘူးဗျို့
ဒီစိတ်နဲ့ နိူင်ငံရေးလုပ်ရင် အသေစော တတ်သဗျို့
နိူင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်ဆင်း ဘိုရှုပ်ရဲစည်
MBA( Master of Brewery Analysis)
ကျွန်တော် ဖင်ယားပြီး မန့်ထားတော့လည်း ဆက်ရှင်းရတာပ ! သူကြီး လို ပုံတွေဘာတွေနဲ့ ထည့်ပြီးမပြတတ်တော့ကာ ပုလင်းပေါ်က စာကူးချလိုက်တာပါဗျာ ! အရက်သမားစာ အရက်သမားစကားဆို တော့ အရက်သမား အချင်းချင်း ပုလင်းပြ ချီးယားခေါ်မန့်တဲ့ သဘောဗျ ! သောက်ပြီး ရွာထဲ မဝင်တော့တာမို့ ခုမှပြန်မန့်လိုက်တယ်ဗျာ !” ရွာထဲ တတ်သိပညာရှင်တွေ များတော့ အရှည်ကြီး လူရှိန်အောင် ရေးလိုက်ပေမဲ့ သောက်မြင်ကပ်ပီး မေးလာရင် မဖြေတတ်တော့… ” ဆိုပြီး ခင်ဗျား နောက်ဆုံး မှာ ရေးထားတဲ့ စာ ! ကျွန်တော် ဖင်ယားပြီး ဆက်ဖြေပေးမယ်ဗျာ ! YE YINT HLAING says:
*** ခင်ဗျားပြောတဲ့ နိုင်ငံက ( ၂ ) မီတာလောက်မြင့်သေးတယ်! ဂဘာမှာ Under of the surface ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် တွေနဲ့လည်း အများကြီး ဆိုင်သေးတယ်ဗျ ! ဘာလဲ ? ခင်ဗျား က မြုပ်စေ ချင်နေပြီလား ? ရှာကြည့်ဗျာ သိချင်ရင် ! ကျွန်တော် ကတော့ ညက များသွားလို့ ရှာမပေးနိုင်ဘူး ! အရက် သမားချင်းမို့ ဒါလောက်တော့ ပြောပေးလိုက်တယ် !
ဟား ဟား ကိုယ့်ဆြာရယ်
ကျနော်ရေးတော့ ကျနော်ဘဲ တာဝန်ယူပါတယ်ဗျာ … နည်းနည်း သရော်ပီး ရေးတာဗျ
ဆက်ရှည်ရင် လိုရင်းတွေ တိမ်းကုန် မစိုးလို့
ဒါလောက်နဲ့ဘဲ ရပ်လိုက်တော့မယ် …………………။
တယောက်နဲ့ တယောက် ဝေဖန်တယ် ထောက်တယ် ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ အပြုသဘောပါ
ဆြာက ဘူမိသမားလားတော့ မသိ …
အချက်ကျကျ ရေးပြတာ ကျုပ်ဝင် နှောက်တော့ ဆြာစိတ်ထိခိုက် မပေါ့လေ။ အဲ့ ပို့စ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ် စာသားနဲ့ ကျနော့်
ကွန်းမင့်ကို သေချာ တွဲ၍ဖတ်ပါလေ။ ဘာဆိုလိုလဲ ဘာသဘောလဲ သိမှာပါ ။ နားမလည်ရင်လဲ မတတ်နိူင်ဘူးဗျို ..။
ဒီဘက်ပို့စ်မှာ လာမန့်ပေးလို့ ကျေးဇူးဗျာ
ဒါပေမဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဖxxxxးဆိုတဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ အသုံးအနှုန်းမျိုးတော့ ကျနော့် စာမျက်နှာမှာ မသုံးစေချင်ဘူး။ ခင်ဗျားစာမျက်နှာမှာလည်း ကျနော်မသုံးဘူး ဘယ်သူ့ စာမျက်နှာမှာလည်း ကျနော်မသုံးဘူး
ကျနော် မကြိုက်ဘူးဗျာ ………………………………….. ။
ကိုဘုန်းကျော် စကားယူသုံးရရင် မကြိုက်ရင် လာမဖတ်ပါနဲ့
လာဖတ်ရင်လဲ ကြိုက်တာပြောသွား ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာနဲ့ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ပြောသွားပါ
ဒီလို အသုံးအနှုန်းတွေတော့ လာမသုံးပါနဲ့
မကျေနပ်ရင် ပရိုက်ဗိတ်မှာ လာပြောပါ
ကျွန်တော့ကွန်မန့် အောက်မှာ ရေးသွားပြီး ပို့ ( စ ) ထဲမှာပါထပ်ပါလာတော့ကာ အမြင်လွဲ၍ တင်းသွားပါကြောင်း ။ နောက်တကြိမ်ဆိုလျှင် ပရိုက်ဗိတ် မှာ လာ၍ပြောပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ။
အတင်းပြေသွားကြပြီဆိုတော့မင်္ဂလာတပါးပေပဲ။ ရဲနှစ်ရဲ ညီအစ်ကိုတွေပြေလည်သွားကြပြီပေါ့။
မနက်က မသောက်ဘူးပြောထားတာ — ခုတော့ ချပြီဗျာ !
စကားအတင်းစပ်.. ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာ.. အရက်သောက်ရင်း.. တန်းလန်း..တရားနာရပြီး… ရဟန္တာဖြစ်တော်မူတဲ့.. အမတ်တပါးရှိခဲ့ဖူးကြောင်း..
အမေရိကန်တွေကိုယ်တိုင်က.. အမေရိကားကို.. ယူအက်စ်လို့ အသုံးများကြောင်း..
အမေရိကားကို.. အမေရိကန်လို့.. တိုင်းပြည်နဲ့..နိုင်ငံသားအမည်..မှားခေါ်ကြတာ.. ကမ္ဘာမှာ… မြန်မာတွေပဲ…ရှိကြောင်း..
.. နေ့စဉ်သုံးသတင်းစာများထဲပါ.. မှားသုံးနေကြောင်း…
The United States of America (commonly called the United States, the U.S., the USA, America, and the States) isafederal constitutional republic comprising fifty …
သိပ သဂျီးကို ကလိထိုးဖို့ စောင့်နေတာ ကြာပေါ့
ဘယ်အချိန် ပေါ်လာမလဲလို့ ……………………
ဒီမှာ ရေးထားတယ်လေ ” USA မှာ ( အမေရိကန်နဲ့ အမေရိက မခွဲတတ်လို့ ) ”
အနော့် ဂိုဂယ်ခရုမ်းက ဘိုးတင်လို့မရဘူး နေပါစေတော့ ဆက်ဆွဲမယ် ……….
United State of America ‘s citizen ကို
ဘာခေါ်ခေါ်ပါဗျာ လေးစားသမှု ရှိပါတယ်
Americanese တော့ ခေါ်လို့မရမှန်း သိပ
US မှာ ဆိနိတ်တာတွေ ၊ NSA ၊ CIA ၊ White House ၊ Home Land အဆုံး စစ်တပ်က နောက်ကွဲမှာ ထိန်းချုပ်မှု ဆိုတာထက်
နောက်ကွယ်က ပါဝင်ပါတ်သက်မှု ရှိကို ရှိနေတယ်ဗျာ ( ဂိမ်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေမှ ကိုးကားသည် )
လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရလည်း အဲလိုမျိုး အတုခိုးချင်သလားမှ မသိတာ ဟိဟိ
အဆင်း ဘီးတပ်ပေးပါအုန်း ဂျီးဂျီးရယ်
United State of America ‘s citizen (အမေရိကပြည်ထောင်စုတိုင်းပြည်နေ နိုင်ငံသား) ကို
သမ္မတက.. စစ်တပ်ရဲ့အကြီးဆုံးရာထူးရှင် Commander-in-chief ဖြစ်ပါတယ်..။ တပ်ကိုစစ်တိုက်ဖို့.. သူကအမိန့်ပေးရတာပါ..။
US မှာ ဆိနိတ်တာတွေ ၊ NSA ၊ CIA ၊ White House ၊ Home Land အဆုံး စစ်တပ်က နောက်ကွယ်ကနေမက.. ရှေ့တည်တည့်ကြိးကလည်း.. ထိန်းချုပ်ဖို့နေနေသာသာ.. ဘယ်ချောင်သွားကပ်နေသလည်းတောင် မသိပါ…
– မတော်.. ဆိနိတ်တာ။ ကွန်ဂရက်မန်းတွေ စစ်တပ်ဘက်ဂျက်ဖြတ်ချလိုက်ရင်..မျိုးကန်းမယ်မဟုတ်လား..
– NSA က.. ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးငှာနအောက်ကပါ..
– CIA က.. Intelligence Community (IC) အောက်ကအဖွဲ့တခုသာပါ..။ IC ကိုတိုက်ရိုက်ကိုင်တာက.. ODNI(Office of the Director of National Intelligence) တဲ့..
– White House က.. သမ္မတအိမ်ဖြုတော်လေ..။ သမ္မတ.. သမ္မတရုံးခင်ဗျ..
– Home Land ကလည်း.. ၀န်ကြီးဌာနတခုသာပါပဲ..
တချို့ မပြောသင့် မပြောထိုက်တာတွေ မပြောတာဘဲကောင်းတယ်
မဆိုသင့် မဆိုအပ်တာတွေ မဆိုတာဘဲ ကောင်းတယ်
ကျနော်တို့ ရိုးရှင်းစွာ ပြောဆိုနေထိုင်တတ်ဖို့ ကြိုးစားရပေအုံးမည်။
ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ နားလည်သယောင် ဟန်လုပ် ဖတ်သွားပြီး သကာလ
နှစ်ခါပြန် သေပျော်စေရန် ကွန်းမန့် ၂၀မြောက်ကို ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်လေသည်။
များသော အားဖြင့်တော့ ကျနော်က ပေါက်တတ်ကရတွေ ရေးလို့
ဖတ်တဲ့သူတွေ မူးနောက်ပီး စိတ်ရှုပ်မှာတော့ ဧကန်ပေါ့
ကွန်းမင့် ၂၀ရပီဆိုတော့ သေပျော်ပါပြီ
ခွစ် ခွစ် ………………………….
ကွန်မင်. ၂၀ရပီဆိုတော.သေသွားပီလားဟင် ထပ်ပေးလို့ရသေးလား
ကရဲစည်က နေ့တိုင်းလဲမူးတယ် နေ့တိုင်းလဲ မေတ္တာပို့တယ်လား ?
မူးမူးနဲ့ ရေးတာလား မသိ….။ ဒါမယ့် အမှန်တွေကို တွေ့ရတယ်ဗျ။
တူလေးဗြဲစည် အဲလေ ရဲစည် နေ့တိုင်းကိုမူးတာပဲလားကွယ်။
ကြွကြွ… ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့အရက်ကိုလဲ တ၀ကြီးသောက်ပြီးဘီ…
ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ ကော်မန့်လဲ (၁၀)ခုကျော်သွားဘီ… နင့်ဘ၀က သေတာပဲအေးပါတယ်ကွယ်…
Fat Cat လေးရယ် ( ခရစ်ဒစ်တူ ကိုရီးယား )
စိတ်ချလက်ချသေလို့ရဘီ ရဲစည်… လက်မလေးတစ်ချောင်းပါ ထောင်ပေးသွားတယ်…
ကရဲစည် ရှင်တော်တော်မူးနေပြီထင်တယ် လာခဲ့စမ်း ဖရဲသီးနဲ့ဘဲဥကျွေးပလိုက်မယ် ဝမ်းလျှောအောင် ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
ဒီကနေ.. လှမ်း..ချွတ်လိုက်တယ် ..
ကျွန်တော်လည်း..အခု မူးနေတယ်ဗျ ။
အလုပ်က အပြန်..လိုင်းကား တိုးစီးလိုက်ရလို့။